ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: ပိုလှချင်တာပေါ့ ..(ပစ္စည်းအညွှန်း)
Posted by ကြည်ကြည် at 6:20 AM
မိုးယံ July 8, 2011 at 6:26 AM
မိန်းမယူရင် ဘယ်လို မိန်းမမျိုးယူရမယ်လို့ ပိုပြီး စဉ်းစားတတ်လာပြီ။ ဟာဟ
ချစ်ကြည်အေး July 8, 2011 at 7:31 AM
ချစ်ကြည်အေး July 8, 2011 at 7:32 AM
ပိုလှချင်တာပေါ့အေ၊ ကြည်ကြည့်လို လှချင်တာ...
AMPLEUR ဝယ်သုံးဦးမှ.... တို့လည်း ကြည်ကြည့်လို ခုတော့ ကျွန်မ ပြုံးနိူင်ပြီလေ လုပ်ချင်လွန်းလို့ပါ ခွိ :))
san htun July 8, 2011 at 7:36 AM
Anonymous July 8, 2011 at 8:14 AM
ပစ္စည်းရောက်လာပြီ ကျေးဇူး ..
DHC တော့ မျက်ခုံးကို လိမ်းမလားလို့
ညိမ်းနိုင် July 8, 2011 at 8:23 AM
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! July 8, 2011 at 12:10 PM
ပြောတော့ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သပါလေ။
မလိုအပ်ပဲ ပလပ်ပေါက်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ မီးကြိုးတွေ ဖြုတ်ပါနော်။ မလိုအပ်သေးပဲ လမ်းကြုံလို့ ဆိုတာတွေ မ၀ယ်ပါနဲ့နော်။ ငလျှင်ဒဏ်ခံလိုက်ရတဲ့ သူတွေ ရဲ့ဘ၀ခဏလေးပဲ ကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်။
PhyoPhyo July 8, 2011 at 1:45 PM
အလှပြင်ပစ္စည်းတွေထက် နားရွက်လေး နည်းနည်းလေးပေါ်တဲ့မျက်နှာလေးကိုပဲ ပိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ အသားလေးများ မွတ်နေတာပဲ။ လှလိုက်တာ။
Baby taster July 8, 2011 at 2:15 PM
ကိုယ်က Sheseido skincare သုံးပါတယ်
ပါးနှစ်ဖက်မှာ တင်းတိပ်နဲနဲလေး မသိမသာ
ဆရာဝန်နဲ့ပြတော့ ဆရာဝန်က ဖြေးဖြေးချင်း
ထွက်လာလိမ့်မယ် ပျောက်ဖို့ခက်မယ်တဲ့ :(
Sheseido skincare က ၄လကို US$320ကျ
ပါတယ်။ ဒီ့ထက်သက်သာတာ ရှိရင်ပြောပြနော်း)
ကျေးဇူးတင်နေမယ်သိလာ။ ဒါနဲ့ ကိုယ့်အသားရေက ခြောက်သွေ့တယ်
ဟင်.. မလိုအပ်တာမ၀ယ်ဘုး လိုအပ်တာပဲဝယ်တာပါ။
ထမင်းစားသလို skin ကလည်း အဟာရပေးရတယ်လေ
ဟုတ်ပြောပါ့မယ် sheseido ကိုဈေးကြီးလို့ မသုံးနိုင်ပါဘူးး)
ခုတင်းတိပ်ဈေးက သောက်ဆေးပါ။ ခက်တာက ၄၀ ကျော်မှသောက်ရမှာ
၀ယ်ပေးလိုက်လို့သောက်နေတဲ့ အန်တီ ၁ ယောက်ကတော့ မျက်စိရှေ့တင်ပါးထွက်သွားတယ်။
နောက်တစ်ယောက်တော့ မမြင်သေးဘူး မေးကြည့်အုန်းမယ်
အပြုံးပန်း July 8, 2011 at 11:38 PM
လှတဲ့သူ၊ လှအောင် ပြင်ဆင်နေထိုင်နိုင်သူတွေကို တကယ်အားကျတယ်၊
ကိုယ့်မျက်နှာမှာ အမဲစက်တွေက အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ပေါ်ပေါ်လာတယ်၊
ဘယ်လိုမှ လုပ်လို့ မရတော့ဘူး၊
မေသိမ့်သိမ့် ကျော် July 9, 2011 at 2:11 AM
AMPLEUR ကို အွန်လိုင်းကနေ ဝယ်လို့ မရဘူးလား ကြည်။ ခုနက သူ့ဆိုက်ကို ဝင်ကြည့်တာ ဂျပန်လိုတွေချည်းပဲတွေ့ရတယ်။ ဒို့က ဘူးသီး ငါးပေါင်း တွေလို့ပဲ မြင်နေတယ်။ ဖတ်တတ်ဘူး။ ဟီး။ သူ့ဆိုင်ခွဲတွေ ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာရှိသေးလဲ သိချင်လိုက်တာ။
Baby taster July 9, 2011 at 4:49 AM
တင်းတိပ်ဆေးက ၄၀ကျော်မှလားဟင်း(
စိတ်ပိန်လိုက်တာ။ ၃၀ကျော်အတွက် တွေ့ရင်
ကြည်ကြည် July 9, 2011 at 7:55 AM
amplure ကလေ မနှစ်ကမှ တအားဟော့လာတာ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာလည်း နံပတ်၁ တို့ဘာတို့ဇြစ်လာတယ် သူ့product အကုန်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့
နောက် ဖော်စပ်သူက အရေပြားဆရာဝန်မ ငယ်သေးတယ် လောလောဆယ်တော့ပြည်ပ မှ ဆိုင်ခွဲမရှိဘူး ။ သေချာထပ်ဖတ်ပေးမယ်။
>> Baby taster ဟုတ်တယ် ဒါပေမယ့်ခု cream ပါတွေ့တယ် ။ နောက်တစ်ပတ်ဆေးဆိုင်သေချာသွားပြီး မေးပေးမယ် ခဏစောင့်နော်
cream ဆိုရင်တော့ ၃၀ကျော်လည်းလိမ်းလို့ရမှာပါနော်
kokoseinygn July 10, 2011 at 8:55 AM
ဆောင်း July 11, 2011 at 7:59 AM
လိုချင်သွားပြီ.. ၀ယ်လို့ လဲမရ ခက်တာဘဲ
မဖြိုးရေ အသားက မီးရောင်နဲ့မို့ပါကွယ် ဘာမှ မလိမ်းထားရင်တော့လည်း အစက်အပျောက်တွေ ရှိပါတယ်။
မအပြုံးပန်း မရေ ဘာလို့ အဲ့လိုပြောရတာလည်း လူတိုင်းတော့ အသက်ကြီးရင် အမဲစက်ပေါ်မှာပဲ ကိုယ်တွေက မင်းသမီးမှ မဟုတ်တာ စိတ်ဓတ်ကျနဲ့ လုပ်ပါ။ လိမ်းပါး)
မဆောင်း တစ်ချို့ဟာတွေက amazon.com မှာရနိုင်တယ်။ ယူအက်စ်ဆိုတော့ တစ်ချို့ဟာတွေရနိုင်တယ်ထင်တယ်။
မချစ်ကတော့ လိုတော့ဘူးလေ ဒီလောက် အရေးကြောင်းကင်းတဲ့မျက်နှာ အားကျပါရဲ့
i want all. :)
Kay September 6, 2011 at 7:58 AM
နောက် ပိုင်း ကြရင်.. botox တွေ ဘာတွေ လာတော့မယ် ထင်တယ်။ အဲကျမှပဲ လာဖတ်တော့မယ်..း)
ကြည်ကြည် September 6, 2011 at 9:06 AM
botox တော့ ကြောက်တယ်ကွယ် ၅ နှစ် ....၅ နှစ် (ကျော်ဟိန်းလေသံဖြင့်) ..
လောက်တော့ စောင့်လိုက်အုန်းမယ် ဟဲဟဲ
Sweety Aung July 11, 2013 at 11:39 PM
ညီမ ရေ ပွတက် လာ တဲ့ mask လေး အ ကြောင်း ရှင်းပြ ပါ ဦးနော်
မျော် နေ မယ်